Kuhlatshwe isigwebo kolwaseDUT | isiZulu
Kuhlatshwe isigwebo kolwaseDUT
UMchunu weseka uNdebele kwelesivinini
Ungqongqoshe uhambele umndeni wobulewe eKZN
Durban - UNgqongqoshe wezokuThutha, ukuPhepha nokuXhumana koMphakathi KwaZulu-Natal, uMnuz Willies Mchunu, udumele ngesigwebo senkantolo esinike umfundi waseDurban University of Technology (DUT) owayeshayela imoto eyabulala abafundi abayisithupha nyakenye, kubika iSolezwe.
UMzuphilile Gadu, 24, uvumile ukubulala ngokungenhloso abafundi abayisithupha ngoMeyi nyakenye wabe esegwetshwa iminyaka emithathu kodwa yalengiswa iminyaka emihlanu ngaphansi kombandela wokuthi angatholakali enza icala elifanayo ngesikhathi sesigwebo.
Unikwe isigwebo sasendlini njengoba ezophinde achithe isikhathi esingamahora angu-16 njalo ngenyanga enza umsebenzi womphakathi mahhala.
UMchunu usihlabe wasihlikiza lesi sigwebo ethi sizothumela umyalezo ongemuhle kwabanye abashayeli ababulala abantu emigwaqeni yakuleli.
“Yize sizihlonipha izinqumo ezithathwa yizinkantolo kodwa sisazosicubungulisisa lesi sinqumo. SinguMnyango sikholelwa wukuthi abashayeli ababulala abantu emigwaqeni kumele bathole izigwebo eziqinile. Sizoqhubeka sifuqe umkhankaso wokucela izinkantolo ukuba ziguqule amacala awokubuala ngokungenhloso afuze leli abe ngawokubulala,” kusho uMchunu ngokudumala.
Uzwakalise ukukhathazeka ngokuthi inkantolo ayishongo lutho ngokumisa uGadu ukuba ashayele imoto futhi kumiswe nelayisensi yakhe yokushayela.
Le ngozi yenzeka ekhoneni likaManning noClark Road, eGlenwood, kwashona abafundi abayisithupha ababebuya emcimbini ngoMeyi 18 wonyaka odlule.
Goodwood - 13:53:06 PM HEAVY TRAFFIC towards Voortrekker Road Ezinye zasemigwaqeni